Maantana ma Maqaamka Cadaado baa? | allsanaag
Maantana ma Maqaamka Cadaado baa?
Maqaam noocee ah ayeey yeelan kartaa degmo ka mid ah degmooyinka Soomaaliya.
Dastuurkii Soomaaliya waxa loo jebiyey, oo gobol iyo nus looga dhigay maamul goboleed, bal in hal mar Fiqi iyo Mahad Salaad beeshooda ay yeeshaan maamul goboled.
Markii la ansixiyey sharci darada ah in gobol iyo nus uu maamul goboleed noqon karo, Mahad Salaad beeshiisu waxay ku heshiin waayeen hogaanka sare ee maamul goboleedkaas . Shirkii Jabuuti ee dhowaan la qabtay waxa lagu heshiisiiyey in beesha Sacad ay madaxweyne ka noqoto maamul goboleedka gobolka iyo Nuska ah ee Galmudug, halka Beesha Cayr ay maamul goboleedka ay ka qabanayso xilka Raisawasaaraha.
Maanta Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi “Farmaajo” ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado kula kulmay Odayaasha iyo waxgaradka beesha Saleemaan ee Habargidir, isagoona kala hadlay Tabashooyin ay qabeen.
Ugu danbayntii Hadddi beesha Sacad ee Habargidir ay qaateen madaxweynhii, Beesha Cayrna Raisawasaarihii, Beesha Saleemaana ay qaateen xaruntii Baarlamaanka ee Cadaado. Beesha Mareexaan ee degta inta badan gobolka Galguduud iyagu ma marti ayeey ku noqon doonaan maamulkaas
← Awad oo ka qeybgalay shir gaar ah oo Ururka Islaamka ku yeeshay Jeddah “SAWIRRO” Alshabaabka gobolka Togdheer →